Factory Tour - Hebei Chenli Rigging Group Co, Ltd.
Hebei Chenli Group Co, Ltd. (Chenli Group) inokwenenzvera vatatu vane mari yakakwana uye mana makagoverwa makambani ebazi, iri muguta rekusimudza uye kugadzira zvigadzirwa mudunhu reHebei, rinova riri bhizinesi hombe rakatsigira pakutsvagisa 、 kuronga nekugadzira zvigadzirwa zvekusimudza nekusimudza. Mazhinji akateedzana anopfuura zviuru zvitatu zvakasiyana zvakatemerwa, kugadzirwa uye kuungana kugona kwasvika pamamirioni manomwe. Simba rakakwana rinomira pamberi pevanokwikwidza muindasitiri yedu.
Chenli Group ine yakakwira mhando yekugadzira tekinoroji uye manejimendi timu, Iyo yazvino gorofa manejimendi dhizaini uye yekugadzira tekinoroji yekugadzirisa maitiro ekugadzirisa maitiro maitiro, yakave yakanyatso kupedzwa shanduko kubva kune kutonga kwekutonga kuenda mukudzivirira kwekudzivirira. Yakasarudzika vashandi vanoshanda mhando uye zvigadzirwa mhando iri pedyo kana kupfuura 4σ
Kubva 2000, Chenli Group ane mabhizimusi ane zvombo nesainzi management. Kambani yedu yakadyara makumi maviri emamiriyoni RMB, yakavakirwa boka rekambani mhando yekuyedza nzvimbo. Muindasitiri imwechete iyi pamberi peC Chenli Group yakapfuura ISO9001 yepasi rose quality management system standard certification.Muna 2005, chigadzirwa chakapfuura European CE, Germany GS chigadzirwa chemhando uye kuchengetedza chitupa. Chenli Group zvakateerana muna2008, 2010, na2012 vakawana iyo "yekusimudza keteni", "vachisimudza chipfuramabwe", "vachisimudza chipfuramabwe vachipakura bhokisi" matatu emunyika patents.
Iyo mota kambani yeChenli Group ndeyekuti mutengi aripo zvachose. Kuvimbika uye kuchengeta kutenda, kuita bhizinesi zvinobudirira, parizvino Chenli Group yenyika yedu inopfuura zana boka hombe reboka, nyika yepurojekiti chirongwa yakapa zvakachengeteka uye zvakanyanya kuvimbika akasiyana siyana maratidziro uye zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumishini, simbi, magetsi emagetsi, njanji, mabasa ekuchengetedza mvura, madoko, ndege, ndege, mota, peturu uye maindasitiri emakemikari etc. Zvigadzirwa zveChenli Group zvinotengeswa mumapurovhinzi anopfuura makumi matatu emadhorobha, maguta uye matunhu zana, seMiddle East 、 European Union, Southeast Asia, North neSouth America etc. Inotumirwa kune nyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu .Magadzira anogamuchirwa zvakanaka uye anovimbwa nevatengi.Regedza rako rutsigiro Chenli Group rave iro indasitiri yekutungamira ruzivo uye hunyanzvi. innovation mutungamiri .Chenli Chikwata chichaita chenli brand vatengi kuve nehupfumi nekusingaperi, Chenli Chikwata chinoda kugara chakamira newe.
Yakakwirira mhando, yakakwirira mwero, rega vatengi vanzwe vakachengeteka zvakanyanya, vakavimbika, zvakanyanya nyore!
Iyo inotungamira yeaigging indasitiri maneja manejimendi uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu.Chenli Chikwata chiri kuda kugara chakamira newe, chichaita kuti Chenli brand vatengi vave nehupfumi nekusingaperi.
Insist kuvandudza, pachako rigging indasitiri yepamusoro manejimendi zvakanakira, hunyanzvi mukana, mhando mukana, nguva dzose zvinosangana tsika zvinodiwa
Kubva 1991, Head Company
Kubva 2005, Qing yuan Kambani
Kubva 2012, Boye Kambani
Kubva 2020, Jiangsu Kambani
CHENLI ZVINHU ZVINOTAURA ZVESE ZVAKAITIKA